राशिफल Archives - Mero Khabar Nepal
आज मंगलबार: धन, धर्म र भाग्यमा तपाईको योग कस्तो छ ? हेर्नुस्
.सं. २०७६ असार ३१, मंगलबार, इ.स. २०१९ जुलाई १६, ने. सं. ११३९ दिल्लाथ्व, आषाढ शुक्लपक्ष। पूर्णिमा, २६:०८ उप्रान्त प्रतिपदा, उपप्रा: लक्ष्मीप्रसाद बराल मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) श्रम परे पनि लगनशीलताले विशेष उपलब्धि दिलाउनेछ। भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। शुभचिन्तकहरूलाई साथमा लिएर काममा जुट्नुहोला, महत्त्वाकांक्षी योजना थालनी हुनेछ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम, दाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। बृष ( इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) तत्काल लाभ नभए पनि पछिका लागि काम गर्ने समय छ। उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। स्वास्थ्य र अर्थका हिसाबले पनि दिन कमजोर रहनेछ। परिस्थितिले अप्ठ्यारा चुनौतीहरूसँग स
आज सोमबार, सोमबारको दिन भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७६ असार ३० गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ! #जयश्रीपशुपतिनाथकी_जय_जय_जय
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) भाग्यभावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिनेछ । धाार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुँने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ भने मन्दिर तिरको यात्रा गरि टिका तथा प्रशाद ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । व्यापार व्यावसायमा थोरै लगानि गर्दा पनि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । राजनितिकर्मी तथा समाजसेवीहरुले जनताको काम गरि राज्यबाट पद प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्र्रयोग तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुहोला नराम्रा घट्नाहरु घट्न सक्छ । व्यापारमा समय दिए अनुशार प्रतिफल प्राप्त नहुँदा आम्दानिको तुलनामा खर्च बढ्नेछ । अध्ययनमा मन नजादा अरु भन्दा पछि परिनेछ भने खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा केहि समय खर्चिय राम्रा तथा उपलब्धिमुलक कामहरु बन्नेछन् । माया प्रेममा अबिश्वास बढ्नेछ मिथुन(का,की,कू,घ
असार २८ गतेदेखि साउन ३ गतेसम्मको राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) लेनदेनमा सजकता अपनाउनु पर्नेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउनेछ । मध्य साताबाट मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,९ र शुभरङ्ग पहेँलो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ । वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो ) धनार्जनका नयाँ स्रोतहरु पत्ता लाग्नेछन् । श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुनेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा समय प्रतिकुल भई मुद्धा मामिलापनि लाग्न सक्नेछ । कुलतमा मन जानेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,५ र शुभरङ्ग रातो वा घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ
असार २८ गते शनिबारको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – महत्वपूर्ण काम धेरै बन्नेछन, लगनशिलता र इमान्दारिताको प्रसम्सा गर्नेहरु पाइएलान, मनमा शान्ति छाउनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – आर्थिक क्षेत्रमा प्रशस्त लाभ हुने संकेत छ, ब्यापार, कृषि, तथा बैदेशिक क्षेत्रमा दिन एकदमै राम्रो छ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – व्यापारमा पनि सुधार आउनेछ । यात्राको क्रममा लाभ मिलनेछ, सन्तानबाट पनि सुख पाइनेछ । कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – स्वास्थ्यमा अचानक गडबडीको संकेत गर्दै छ, त्यसले गर्दा रुपैयापैसाको हानी हुन सक्छ । सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – पढाइमा सफलता पाउने आफन्त हरुको सहयोग र बौद्धिक उन्नतिले काममा सफलता मिल्ने छ । कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – आज तपाइको खर्च भन्दा कमाइ नै बढी हुने योग छ, छरछिमेकबाट सरसहयोग प्राप्त होला ।
भोली बिहीबार, बिहीबारको दिनमा पाथिभरामाईको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७६ जेठ २६ गते बिहीबारको राशिफल पढ्नुहोस् ।
व्यापार तथा व्यावसाय बिश्तारको सन्द्रर्भमा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । घर परिवार तथा आफन्तहरुको सहयोगमा महत्वपुर्ण तथा सकारात्मक कामहरु अगाडि बढाउँन सकिने समय रहेकोछ । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर मिल्नेछ भने आथित्यपुर्ण सम्मान प्राईने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । नयाँ सोच तथा नबिन बिचार आउँने हुँनाले बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुनेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) समाजमा आफ्नो खुबि प्रयोग गरि नाम कमाउन सकिनेछ । बिवाद तथा प्रतिष्पर्धामा अरुलाई उछिन्दै तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । अदालति निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् भने सत्रुहरु आफै किनारा लाग्नेछन् । व्यापार व्यावासायमा लगनशिल तथा ईमान्दारिताका साथ लाग्नाले मनग्गे रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ । व्यापारकै शिलशिलामा लामो दुरियो यात्रा गर्न सकिनेछ । मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) भोगबिलासका सामा
भगवान पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन , हेर्नुहोस तपाइको को सोमबारको राशिफल
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – नया कार्ययोजना बनाई आम्दानिका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ भने व्यापारमा गरिएको लगानिबाट भनेजस्तो लाभ हुनेछ । पढाई लेखाईमा बिशेष चासो बढ्नेछ भने प्राबिधिक शिक्षामा सफलता हात लाग्नेछ । समाजमा सानो काम गरि नाम कमाउन सकिनेछ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । स्वास्थ्य सबल रहने हुनाले राम्रा तथा उपलब्धिमुलक कामहरु सम्पादन गर्न सकिनेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) – बिभिन्न बिलाशी बस्तु तथा भौतिक सम्पति हात लागी हुँने योग रहेकोछ । मन परेको मानिसबाट उपाहार प्राप्त हुँनेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । माया प्रेममको डोरो कसिलो भएर जाने तथा जीवन साथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । चिठ्ठा तथा लट्री पर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । सन्तान तथा आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउँनेछ । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) – घर जग्गा तथा पशुपालन व
भोली वि.सं.२०७६ साल असार २३ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुस
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) नया कार्ययोजना बनाई आम्दानिका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ भने व्यापारमा गरिएको लगानिबाट भनेजस्तो लाभ हुनेछ । पढाई लेखाईमा बिशेष चासो बढ्नेछ भने प्राबिधिक शिक्षामा सफलता हात लाग्नेछ । समाजमा सानो काम गरि नाम कमाउन सकिनेछ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । स्वास्थ्य सबल रहने हुनाले राम्रा तथा उपलब्धिमुलक कामहरु सम्पादन गर्न सकिनेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) बिभिन्न बिलाशी बस्तु तथा भौतिक सम्पति हात लागी हुँने योग रहेकोछ । मन परेको मानिसबाट उपाहार प्राप्त हुँनेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । माया प्रेममको डोरो कसिलो भएर जाने तथा जीवन साथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । चिठ्ठा तथा लट्री पर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । सन्तान तथा आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउँनेछ । मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) घर जग्गा तथा पशुपालन व्यावसायमा
बाग्लुगं कालीका माइले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशिफल
मेषः– सोमबारसम्म समय अनुकुल त्यति देखिन्न । चिन्तामग्न भएर बस्नु पर्नेछ । विभिन्न खालका समस्याहरुसँग जुद्धनु पर्नेछ । बातावरण भत्किनेछ,सहज रुपमा काम हुने छैनन । आर्थिक समस्या झेल्नु पर्नेछ । मंगलबार देखि समयले साथ दिनेछ । उपकारी काम हुनेछन् । टुटे फुटेका कुरा मिल्ने छन् । समस्या समाधान भएर जाने छन् । आत्मबल आत्म विश्वास बढ्नेछ । अबरुद्ध कामले गति लिनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारु हुने छन् । वृषः–६ गते सम्म समय अनुकुल देखिन्छ । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । जीवनसाथिको साथले मनमा उमङ्ग बढ्नेछ । यात्राको योग पनि देखिन्छ । उप्रान्त विहिबार अपरान्ह सम्म समय खराव रहला । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । इज्जत प्रतिष्ठामा आच आउन सक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । धन सम्पति चोरी वा
शनिबारको राशीफल : राशीअनुसार तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस्
बृष ( इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो ) प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउन सक्छ। महत्त्वपूर्ण योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला। घरायसी आवश्यकता बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ। फाइदाका लागि साइनो गाँसी नजिकिनेहरूबाट सावधान रहनुहोला। मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह ) सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइनेछ। विशेष उपहार समेत हातलागी हुन सक्छ। कृषिमा कामको चाप र चौपायामा केही समस्या देखिए पनि धन आर्जन प्रशस्तै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सफल भइनेछ । कर्कट ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो ) वचन पुर्याउन नसक्ता अरूले आलोचन